I-Semalt: I-WordPress Plugin yeSayithi Yakho - Iseluleko esiphezulu
i-WordPress themes yenza kube lula ukuthi abasebenzisi bakhe amawebhusayithi ahlukahlukene. Noma kunjalo, inqubo yokuklama yenza ukukhetha isihloko esibucayi kakhulu kunzima. Ngenhlanhla, manje kungenzeka ukuphululela umtapo wezincwadi zibe yizigaba ezinengqondo zamahhala noma i-premium, nezinhloso ezilodwa noma izindikimba eziningi.
U-Oliver King, oyedwa ochwepheshe abanolwazi oluvela kunazo zonke kusuka ku Semalt , unikeza kulesi sihloko incazelo ewusizo kulokhu okufanele ucabangele.
Ukungqubuzana Phakathi Kwezihloko Zamahhala Ne-Premium WordPress
I-WordPress isiza ukubeka isisekelo sewebhusayithi yakho. Isihloko esihle kakhulu se-WordPress senza kube lula ukwenza ngokwezifiso isayithi lakho ngokuthanda kwakho. Mane nje ukhethe okuhambisana nomklamo wakho. Kudinga ukuthi uqale uqonde ukuthi yiziphi izinketho ezitholakalayo.
I-Pros and Cons of Free WordPress Themes
Izingqikithi zamahhala ze-WordPress zilungile kulabo abasebenzisi abangenawo isabelomali okwamanje abafuna izisombululo zewebhu. Izingqikithi zamahhala azikhiqizi izinzuzo kubathuthukisi ngencazelo. Ngakho-ke abathuthukisi bangase bangakhululeki, kwezinye izimo, ukunikeza usizo oluzinikele noma izibuyekezo ezivamile zabasebenzisi babo. Umphumela wukuthi ushiya iwebhusayithi ibe yingozi engozini yokuphepha.
Kunezinhlobonhlobo eziningi zamahhala abasebenzisi abangasebenzisa kumawebhusayithi abo. Ngisho noma zingathengiswa, gcina ingqondo yomthengi uqaphele futhi uhlale uqaphele ukuthi yiziphi izihloko ozakhayo kuwebhusayithi yakho.
I-Pros and Cons ye-Premium WordPress Themes
Inzuzo ukuthi izingqungquthela ze-premium zinezikhulu ezingaphezu kwamahhala ukuthi ziza ngokusekelwa okuzinikezele. Bafaka imali yesikhathi esisodwa ekuthengeni, kodwa lokhu kungashintsha kuye ngenani lamasayithi umsebenzisi efisa ukuwafaka. Ithimu ze-Premium zithola izibuyekezo ezijwayelekile futhi zivikelekile kakhulu. Ngezinye izikhathi ziphela zivaliwe ngoba zihlale ziphuthuma ukukhipha izici eziningi nakuba zingabasizi bonke abasebenzisi.
Ukwahlukahluka phakathi kweNhloso Yodwa ne-Multipurpose WordPress Themes
Ukukhetha phakathi kwetheksthi ye-WordPress yamahhala kanye ne-premium kuyisinyathelo esisodwa ekuqondeni ukwehlisa phansi kwakho. Okulandelayo, udinga ukunquma ukuthi iwebhusayithi yakho izodinga inhloso eyodwa noma inhloso eyodwa. 10)
Izinzuzo kanye ne-Cons of Purpose Purpose WordPress Themes
Izingqikithi ezihlosile zodwa zihlose i-subset ethile yewebhusayithi. Isibonelo, kungaba uhlobo lwesayithi elifana nebhulogi, noma imboni ethile.Basiza abasebenzisi ukuthi banikeza umkhiqizo wokuphela 'we-bespoke' futhi ngokuvamile ushibhile kunezingqikithi eziningi. Ngokulinganiselwa kwabo ekusebenziseni kwabo, ungalindela ukwesekwa kwekhwalithi ephezulu.
Ukulinganiselwa kwesihloko futhi akusekeli indawo eguquguqukayo. Kusho ukuthi uma kwenzeka esikhathini esizayo uzizwa uthanda ukushintsha isayithi lakho, ngakho-ke kungenzeka ukuthi ubheke okuthile okusha ngoba isihloko esisodwa senhloko ngeke senze okudingekayo.
Izinzuzo kanye ne-Cons of Multiplication WordPress Themes
Isihloko esinomthelela omkhulu sihloko esiyingqayizivele ngamathuluzi amaningi nemisebenzi ehloswe ekukhuliseni isabelo sabo semakethe. Lezi zihloko zinezinhla ezibanzi zesakhiwo esakhelwe ngaphambilini nama-demos kanye ne-plethora yezimpawu kanye nama-plugin we-WordPress ehlanganisiwe. Inhlanganisela yenza kube lula ukwakha noma iyiphi iwebhusayithi kunoma yikuphi okufunayo. Okuwukuphela kokukodwa kulawo masayithi anezidingo zokusebenza eziphezulu. Uma ukhetha isihloko sekhwalithi ephezulu, ungase ungadingeki ukuthenga enye indaba esikhathini esizayo. Izingqikithi eziningi zijwayele ukufaka ukubhoboza futhi akuzona i-suit enhle kakhulu yokuthola izidingo ezikhethekile.
Isihlonzi sokukhetha isihloko esiqondile
1. Ibhajethi: khetha indaba ekhululekile uma ungenayo imali ongayisebenzisa. Uma kungenjalo, ukuchitha ngekhwalithi kungakusiza kakhulu esikhathini esizayo.
2. Yini oyakhayo? Khetha isihloko esisodwa senhloko uma wazi uhlobo lwewebhusayithi oyifisa ukuyihlakulela, uyaqiniseka ukuthi izici ezidingekayo, futhi uyaqiniseka ukuthi lezi zidingo azihlelwe ukushintsha noma kunini. Uma ufuna ukusebenza okungavumelekile nokuguquguquka, isihloko esiyi-multipurpose ukubheja kwakho okuhle kakhulu.
Ezinye zezindawo ongaqala ngazo ukusesha kwezingqikithi ziyi-WordPress.org ne-ThemeForest. Izingqikithi zamahhala ziyi-WordPress.org kuphela, kodwa ungaphinde uvakashele i-ThemeIsle, i-HeroThemes, noma i-Nimbus Themes ye-search eyengeziwe yomsindo we-premium.
Naphezu kwenkinga yobuningi bezingqikithi ze-WordPress, ukukhetha okulungile kuwe kuncike kulokho kufanelana nesabelomali sakho futhi okufanelana nezidingo zakho zewebhu.